Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Announcement in Commemorations on 2nd Anniversary of Renewed Fighting
Announcement in Commemorations on 2nd Anniversary of Renewed Fighting
at 6/08/2013 03:37:00 AM
Announcement in Commemorations on 2nd Anniversary of Renewed Fighting June9will mark2years of renewed fighting between the Tatmadaw and the Kachin Independence Army in Kachin State. Speaking on behalf of 18 civil society organizations who are coming together to commemorate the anniversary, Khon Ja from the Kachin Peace Network speaks about the importance of this day. The commemoration events in Yangon on June9will includeamarch, interfaith prayer ceremony, performances, sharing of experiences from an internally displaced person, screening of the documentary film "Hopes Behind War", acknowledgement of media coverage of the conflict and the peace process, and presentation ofacollective statement. View the Burmese version here: http://bit.ly/124Bpxj ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အိုကြား စစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ နှစ်, နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်။ စစ်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ကြတဲ့ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁၈ ဖွဲ့ကိုယ်စား ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်မှ ဒေါ်ခွန်ဂျာက ဒီနေ့ရက်ရဲ့ အရေးကြီးပုံကို ပြောကြားသွားပါသည်။ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်မဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားမှာ လမ်းလျောက်ချီတက်ခြင်း၊ ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲ၊ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု၊ စစ်ပွဲကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသူ တစ်ဦးရဲ့ မိမိအတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်ဝေငှခြင်း၊ စစ်ပွဲနောက်ကွယ်မျှော်လင့်ချက်များ (Hopes Behind War) မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကိုပြသခြင်း၊ ပဋိပက္ခများနှင့် ငြိမ်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို မီဒီယာတွေရဲ့ ပြန်လည်ဖော်ပြမှုအပေါ် အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စုပေါင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Labels: News, SHANA SHABRA NDAU AI LAM, video